Ultrasonic Mvura Meter, China Ultrasonic Mvura Meter Vagadziri, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd
Imba>Products Supplier>Metering Gauge
Iyo ultrasonic mvura mita inogadzirwa zvichibva pamusimboti we ultrasonic kuyerwa kwekuparadzira velocity musiyano nzira. Icho chiridzwa chinobatanidza kuyerwa, kuverenga uye kuratidza pamwe chete, uye inotora micro-simba rekushandisa tekinoroji. Sero 1 rebhatiri rinogona kushandiswa kweanopfuura makore matanhatu, uye rinogona kuona kuyerwa kwakaringana kwehudiki hwekuyerera kwe6m³/h. Iine basa rekugadzirisa uye kudzikamisa kuyerera kwemvura kune yakayerwa mvura yemunda, iyo isingavhiringidzwi nekuyerera kwemvura uye mhirizhonga mumunda wemvura, zvichiita kuti kuyerwa kuve kwakarurama uye kwakavimbika; Zvichakadaro, chiridzwa chine hunhu hwevhoriyamu diki, kugadzikana kwakanaka uye kwakasimba kunopesana nekukanganisa kugona.
Iwo akadzama maficha eiyo ultrasonic mvura mita:
1. Ultrasonic kuyerera kuyerwa tekinoroji inogamuchirwa kuti ione kuisirwa kwe-multi-angle, uye kuyerwa kwechiridzwa hachikanganisike, uye kurasikirwa kwepombi yekumanikidza kunoderedzwa;
2. Ultrasonic mvura yemamita pombi chimiro haina michina inofamba zvikamu, hapana mechanical kupfeka, zvichiita kushandisa kwenguva refu;
3. Mapombi anogadzirwa nemhangura inoshamwaridzana nenharaunda, tsvuku yekufogisa uye CNC chaiyo machining;
4. Kana iyo pombi isina chinhu kana iyo yemvura yakamira kwenguva yakareba, inogona kupinda mune otomatiki simba rekuchengetedza basa;
5. Ne data storage chip E2PROM, inogona kuchengetedza nhoroondo yekuchengetedza data kwemwedzi 8;
6. Real-time kuchengetedza data: Dhata senge cumulative flow rate uye velocity inofanira kuchengetwa nguva nenguva.
7. Neotomatiki kukanganisa kuchenesa valve basa, chiyeuchidzo chenguva, kupera kwevhavhavhavha yekuvhara, inogona kuve nechokwadi chekuchaja kwemvura, uye hurongwa hwekutarisira hunogona kunge huri kure;
8.Iyo yakanyatsogadzirirwa chiratidzo chekuenzanisa sampling circuit inovimbisa kuti chiratidzo hachizokanganiswi pasi pemamiriro akasiyana-siyana, nokudaro kuve nechokwadi chekuenzanisa uye kuvimbika zviyero zvekuyera.
Medium Voltage uye High Voltage Switchgears
Iyo HZ3000 Computer Monitoring System (SCADA System)